Ihe a ga - ahụ n’obodo Romania nke Bistrita na Transylvania | Akụkọ Njem
Ihe ị ga-ahụ na Bistrita, Romania
Susana Garcia | | Getaways Europe, General, Romania
Bistrita dị na mpaghara akụkọ ihe mere eme nke Transylvania na Romania. N'ezie, a bịara mara ebe a dị ka obodo ebe ejiri nnukwu ụlọ Dracula rụọ, ya mere amaara ya n'ụwa niile.
Nke a mara mma obodo emi odude ke ukot nke Bargau Ugwu ọ bụrịrị ebe njem na azụmahịa dị n'etiti obodo ukwu, ya mere ọ gara nke ọma kemgbe ọtụtụ narị afọ. Ọ bụ ezigbo obodo dị na mpaghara ugwu nke Romania yana kwa ndị njem nleta nke bara uru ileta.
1 Mara obodo Bistrita
3 Lọ Elu nke Dogars
4 Urcheska ụka nke Bistrita
5 Ogige obodo
6 Obí eze
7 Obodo Obodo nke Bistrita
8 Arglọ Argintarului
9 Kedu ihe ị ga-ahụ na nso Bistrita
Mara obodo Bistrita
Obodo a bụ isi obodo mpaghara Bistrita-Nasaud, nke dị na mpaghara Transylvania, Romania. Onye ọ bụla maara aha obodo a na nke Transylvania mgbe ọ na-akọ banyere akụkọ Dracula nke Bram Stoker dere. N'ime akwụkwọ a, a na-ekwu mpaghara a dị ka ebe ebe agwa a bi, na Bistrita dị ka ebe onye protagonist nọ. Dị ka ọchịchọ ịmata ihe anyị ga-ekwu na mgbe akwụkwọ akụkọ ahụ ghọrọ ewu ewu, e mepụtara ụlọ nkwari akụ nke nwere otu aha ahụ dị na akwụkwọ ahụ, Golden Krone.
Otú ọ dị, obodo a bụ ebe akụkọ ihe mere eme nke nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye, gafere mmekọrịta na Dracula. A chọtala ebe obibi site na Neolithic ma ndị Saxen Transylvanian biri na mpaghara ahụ mmalite narị afọ nke 1920. Ruo XNUMX obodo ahụ bụ akụkụ nke Alaeze Hungary.
E wusiri obodo a na narị afọ nke XNUMX ma nwee ọganihu. Agbanyeghị, na narị afọ nke iri na asaa ụlọ a nke chebere ya mebiri emebi site na ndị agha Austria. Ugbu a na e nwere ụfọdụ ochie vestiges ndị na- ụlọ nke ndị ahịa oge ochie nke narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX. A maara mpaghara a nke ọma dịka Sugalete ma kwụpụta maka inwe ụlọ ndị nwere arches mara mma na gallery. Site na obodo ochie ochie enwere akụkụ ụfọdụ nke mgbidi n'okporo ámá nke Kogalniceanu na Teodoroiuque.
Lọ Elu nke Dogars
Nke a bụ pụrụ iche ochie elu nke ahu fọduru nke mb whene ahu mb whene ewusiri obodo ike ma chebe ya. A maara ụlọ elu a dị ka Tower nke coopers. N'ime ụlọ elu a, anyị nwere ike ịchọta ọkwa dị iche iche atọ, nke anyị nwere ike ịchọta ihe ngosi nka nke puppets na masks.
Urcheska ụka nke Bistrita
Obodo a kwụpụkwara maka ụka ya, na-eme ka ụka Lutheran dị na Piata Unirii. Ọ bụ wuru na XNUMXth na XNUMXth century ọ nwekwara ụdị mara mma nke goth. O nwekwara ụdị Renaissance ụfọdụ na n'ime ya enwere ike ịchọta mgbidi na mgbidi ndị echekwara nke ọma. Otu akụkụ ụka nwere ihe karịrị narị afọ ise. Nke a bụkwa ụlọ ụka nkume kachasị elu na Romania, nke nwere ụlọ mgbịrịgba dị mita 76. Churchlọ ụka ọzọ dị n’obodo ahụ bụ Ọtọdọks, site na narị afọ nke XNUMX ma mekwa ya n’ụdị ndị Gothic.
Na nso Towerlọ Elu nke Dogars ka ogige ime obodo, ebe izu ike zuru oke maka ndị njem. Ejiri ogige a na narị afọ nke XNUMX ma bụrụ ebe nzukọ na oge ezumike maka ndị obodo niile.
Kpamkpam na ogige ntụrụndụ bụ Palacelọ Omenala nke obodo. O kwere omume ileta ụlọ ahụ ma ọ bụrụ na anyị nwere ihu ọma, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ihe omume, ma ọ bụ ụlọ ihe nkiri ma ọ bụ ọbụlagodi ememme.
Obodo Obodo nke Bistrita
El Obodo Museum nke obodo Ọ bụ ebe mmasị maka ndị njem, ebe ọ bụ na n'ime ya ị nwere ike ịchọta ngalaba nke ihe ochie, akụkọ agbụrụ na akụkọ ihe mere eme nke obodo ahụ. N’ụlọ ngosi ihe nka nka enwere nka ndi Romania na ihe omuma. A na-akpọ ya Muzuel Judetean ma ọ dị na General Grigori Balan Boulevard.
Nke a bụ ulo nke otu n'ime ndị ọla obodo Bistrita kacha mkpa n'oge emepechabeghị emepe. Taa ọ nwere ụlọ akwụkwọ nke agba egwu, egwu na akụkọ ifo.
Kedu ihe ị ga-ahụ na nso Bistrita
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnọgide na njem a raara nye Dracula, kwa anyị nwere ike ịgafe na Sighisoara, obodo nke Vlad Tepes bi, onye akụkọ ihe mere eme nke kpaliri Dracula. N'ime obodo a ị nwere ike ịhụ ebe dịka Ebe Ndebe Ihe Ochie na ụlọ akwụkwọ pụrụ iche nke nwere oke osisi. I nwekwara ike ileta visitlọ Akwụkwọ Ochie, yana ihe ochie metụtara gburugburu ụlọ akwụkwọ.
Cluj-Napoca bụ obodo ukwu ọzọ na ị nwere ike ịga na Romania. N'obodo a ị nwere ike ịhụ ọmarịcha ụka nke San Miguel n'ụdị Gothic yana Katidral nke Nwanyị Nwanyị nke Mwere. Bánffy Obí ma ọ bụ sara mbara Botanical Ogige ndị ọzọ kwesịrị-ahụ na obodo a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga-ahụ na Bistrita, Romania
Gịnị mere njem ji dị ụmụ anyị mkpa?
Ebe Ndebe Ihe Omume dị na Madrid